प्राणवायु - विकिपिडिया
(औक्सीजन बाट पठाईएको)
प्राणवायू (मराठी: ऑक्सिजन, नेपाली: अक्सिजन) रंगहीन, स्वादहीन तथा गन्धरहित ग्यास हो। यसको खोज, प्राप्ति अथवा प्रारम्भिक अध्ययनमा जे. प्रीस्टले र सी.डब्ल्यू. शेलेले महत्त्वपूर्ण कार्य गरेकोछ। यो एक भौतिक तत्त्व हो। सन् १७७२ ई.मा कार्ल शीलेले पोटॅशियम नायट्रेटलाई तताएर ऑक्सिजन गॅस तैयार गरे, तर तिनको यो कार्य सन् १७७७ ई.मा प्रकाशित भयो। सन् १७७४ ई.मा जोसेफ प्रिस्टलेले मर्क्युरिक-ऑक्साइडलाई गरम गरेर ऑक्सिजन गॅस तैयार गरे। ऍन्टोनी लॅवोइजियरले यस गॅसका गुणहरूको वर्णन गरे तथा यसको नाम ऑक्सिजन राखे जसको अर्थ छ - 'अम्ल उत्पादक'।
ऑक्सिजन पृथ्वीका अनेक पदार्थहरूमा रहन्छ र वास्तवमा अन्य तत्वहरूको तुलनामा यसको मात्रा सबैभन्दा अधिक छ। ऑक्सिजन वायुमण्डलमा स्वतन्त्र रूपमा मिल्दछ र आयतनका अनुसार त्यसका लगभग पाचौ भाग हो। यौगिक रूपमा पानी, खनिज तथा चट्टानहरूको यो महत्त्वपूर्ण अंश हो। वनस्पति तथा प्राणीहरूका प्राय: सब शारीरिक पदार्थहरूको ऑक्सिजन एक आवश्यक तत्व हो।
जीवित प्राणीहरूका लागि अक्सिजन अति आवश्यक हुन्छ। यसलाई तिनीहरूले श्वासप्रस्वास क्रियाद्वारा ग्रहण गर्दछन् । द्रव्य अक्सिजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम, इत्यादिको मिश्रण अति विस्फोटक हो। यस लागि यिनको उपयोग कडा वस्तुहरू (चट्टान इत्यादि) तोडनमा हुन्छ। फलामको मोटी चद्दर काटने अथवा मशीनका टूटे फुटेका भागहरूलाई जोड्ने कार्यमा अक्सिजन तथा दहनशील ग्यासलाई ब्लो पाइपमा जलालाईन्छ यस प्रकार उत्पन्न ज्वालाको ताप धेरै अधिक हुन्छ। साधारण अक्सिजनका साथ हाइड्रोजन वा एसिटिलीन जलाई जान्छ । यसका लागि यी ग्यासहरू इस्पातका बेलनहरू (सिलिंडर्स)मा अति संपीडित अवस्थामा बिगर्छन्। अक्सिजन सिरका, वार्निश इत्यादि बनाउने तथा असाध्य रोगिहरूका सास लिनको लागि पनि उपयोगी हो । साथै तरल अक्सिजन ग्यांस रकेटमा इन्धनको लागि पनि अति उपयोगी हुन्छ ।
क्षारीय धातुहरु क्षारीय पार्थिव धातुहरु लैन्थेनाइड्स ऐक्टिनाइड्स सन्धगत तत्व अन्य धातुहरु उपधातुहरु अन्य अधातुहरु हैलोजन निष्क्रिय गैस
विकिमिडिया कमन्समा Oxygen सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्राणवायु&oldid=902820" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:४७, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।